Slalom: tompondaka nasionaly Rakotomiarana Tsiory | NewsMada
Nafana vay ny fifaninanam-pirenena, dingana farany, slalom. Fifaninanana izay natao teny amin’ny TMF Ivato, ny faran’ny herinandro lasa teo. Voatazon’i Tsiory ny lohany ary misalotra ny anaram-boninahitra 2018 izy.
Nifarana, tamin’ny dingana faha-7, notontosaina ny asabotsy lasa teo sy omaly alahady, ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2018, slalom. Tsy nahagaga loatra ny vokatra ho an-dRakotomiarana Tsiory satria nanantombo izy tamin’ny isa ka misalotra ny anarana maha tompondakan’i Madagasikara azy, amin’ity taona 2018 ity. Vitany tao anatin’ny fe-potoana tsara dia ny tsara ny fifanandrinana ary tsy nahita fahasoratana firy loatra miohatra amin’ny mpanamory hafa izy. Maro ihany mantsy ny fiara nivadika sy nisedra olana noho hasarotan’ny lalana. Na izany aza, samy niezaka ny namita hatramin’ny farany avokoa ireo mpandray anjara rehetra.
Laharana voalohany, araka izany, i Tsiory amin’ny filaharana ankapobeny ary namiratra tao amin’ny sokajy nisy azy (2RM). Nanitsaka ny fahatongavana farany izy tamin’ny fotoana 2 mn sy 50 s. Laharana faharoa manaraka azy amin’ity sokajy 2RM ity kosa Rasoamaromaka Mika ary Rabekoto Frédéric kosa ny mamarana ny telo voalohany. Tsy tazana Rasoamaromaka Faniry tamin’ity dingana farany ity.
Nanao pao-droa Rabekoto Frédéric satria tompondaka ihany koa izy tamin’ny sokajy 4RM. Rabesaotra Mickael ny faharoa ary Rafenoarisoa Steffy ny fahatelo, mpilalao vehivavy anisany sangany amin’ity fifaninanana ity.
Nifarana, araka izany, ny fiadiana ny tompondaka nasionaly 2018 ary Rakotomiarana Tsiory no nibata ny amboara amin’ny filaharana ankapobeny. Mpanamory niady mafy hatrany am-piandohan’ny fifaninanana, dingana voalohany.
Ireo telo voalohany, dingana faha-7, slalom
1-Rabenanahary Rado (Cross Car Wild): 03:03
2-Rabenanahary Velotiana (Cross Car Wild): 03:14
3-Razanamparany Jhimmy (Cross Car):03:15
1-Rakotomiarana Tsiory (Peugeot 106 Motul Service): 02:50
2-Rasoamaromaka Mika (Citroen C2 TMF): 02:52:02
3-Rabekoto Frédéric (Peugeot 206): 02:52:82
1-Rabekoto Frédéric (Subaru N12): 02 :48
2-Rabesaotra Mickael (Subaru Go Janga) : 02 :54
3-Rafenoarisoa Steffy (Subaru Go Janga) : 03 :09